Warbixin: Dowladaha Khaliijka oo Abaabulay Afgembigii fashilmey 1996-dii ee dalka Qadar.
Monday March 12, 2018 - 19:32:45 in Wararka by Super Admin
Telefeshinka Aljazeera ee laga leeyahay dalka Qadar ayaa barnaamijka lagu magacaabo " Wixii qarsoon ayaa weyn" oo inta badan lagu soo bandhigo baaritaanno uu telefeshinku sameeyey wuxuu kusoo qaatay isku daygii fashilmey ee 1996-dii lagu do
Telefeshinka Aljazeera ee laga leeyahay dalka Qadar ayaa barnaamijka lagu magacaabo " Wixii qarsoon ayaa weyn" oo inta badan lagu soo bandhigo baaritaanno uu telefeshinku sameeyey wuxuu kusoo qaatay isku daygii fashilmey ee 1996-dii lagu doonayay in lagu afgembiyo qoyska talada dalkaas gacanta ku haya.
Baaritaankan oo ka kooban labo juz, midkiina la daawan karo kudhowaad hal saac ayaa waxaa markii ugu horeysay kasoo muuqanaya saraakiil sar sare oo wax ka abaabulay afgembigaas, kuwaas oo si faafahsan uga sheekeeyey wixii dhacay, iyo dowladihii ka dambeeyay.
Dowladaha Imaaraatka, Baxreyn, Aala-Sucuud iyo Masar oo hadda go’doon kusoo rogay dalka Qadar ayaa masuul ka ahaa abaabulka afgembigaas fashilmey, waxaana dowlad kasta ay lahayd dowr iyo kaalin gaar ah.
Saraakiil sar sare oo katirsan booliiska iyo sirdoonka dowladda Qadar ayaa wax ka ogaa afgembigaas, waxaana dowladda Masar ay damaanad qaaday bixinta hubka, halka Aala-Sucuud, Baxreyn iyo Imaaraatku ay dhiseen talis dhexe oo fadhigiisu yahay dhulka Xarameynka, kuwaas oo hagayay qorshaha afgembiga.
Qorshaha wuxuu ahaa in ciidamada Afgembiga ku dhaqaaqaya ay hareerayaan guriga uu magaalada Dowxa ka degnaa amiirkii xilligaas, kuna qasbaan inuu isasoo dhiibo, waxaana markaas dowladda Imaaraatka ay xireysaa gebi ahaanba dalka Qadar, si aaney u baxsan mas’uuliyiin katirsan dowladda.
Maamulka Aala-Sucuud ayaa xuduuda kasoo gudbinaya malleeshiyaad beeleed kasoo jeeda Xarameynka, kuwaas oo iyagana taageero milliteri siinaya ciidamada Afgembiga ku kacaya oo ay macquul ahayd in arimaha qaar ay ku adkaadaan.
Dowladda Masar waxay xiriir la sameysay saraakiil masaari ah oo katirsanaa dowladda Qadar, kuwaas oo ay ku qancisay in marka la gaaro saacatu sifirka ay qeyb ka noqdaan afgembiga.
Wax weliba waxay u socdeen qaabkii ay dowladahaas u qorsheeyaan, illaa markii dambe xubin katirsan kooxda Afgembiga gaar ahaan saraakiishii safka dhexe uu go’aansaday in dowladda Qadar uu ku wargeliyo qorshaha jira.
Dowladda Qadar ayaa si looga hortago afgembiga waxay u wacday dhamaan saraakiishii ciidamada oo intooda badan ku maqnaa fasaxa maalmaha ciidda, waxaana ciidamo dheeraad ah lasoo tubay xarumaha ugu muhiimsan ee dowladda.
Safiirkii Maraykanka u fadhiyay xilligaas dalka Qadar oo kasoo muuqanaya filimkan baaritaanka ah ee Aljazeera ay baahisay ayaa sheegay in si deg deg ah loogu wacay isaga, uuna u tagay amiirkii Qadar, kaas oo ku wargeliyay macluumaadka ay helayaan, kana codsaday in dowladda Maraykanka ay isgarab taagno maamulkiisa.
Juzka labaad ee filimka ayaa lagu soo bandhigay arimo kale oo la yaab leh, waxaa kamid ah arimahaas in boqorka Baxreyn Xamad bin Ciisaa oo xilligaas ahaa dhaxalsugaha dalkaas uu maalgeliyay qorshe lagu doonayay in dalka Qadar looga fuliyo qaraxyo waaweyn, kadib fashilkii Afgembiga.
Isku dayada uu ninkaas sameeyey waxaa kamid ah qarax la dhigay dhismaha hay’adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda Qadar bishii Octobar 1996-dii, inkastoo qaraxaasi uusan dhicin kadib markii ciidamada Booliiska ay miinada gacanta ku dhigeen iyadoo aan qarxin.
Hadafka ugu weyn ee afgembiga wuxuu ahaa sida uu sheegayo safiirkii Maraykanka ee Qadar xilligaas Batric Theros wuxuu ahaa in la dilo dhamaan xubnaha ugu sarreeya ee qosyka talada haya, markaas kadibna talada dalka dib loogu celiyo gacanta Sheykh Khaliifa oo joogay dalka Imaaraatka Carabta.
Markii uu Afgembigu fashilmay waxay dowladda Imaaraatka soo dhaweyn ballaaran u sameysay saraakiishii abaabulka wax kalahaa ee soo baxsaday, waxaana la siiyay dhalshada dalka Imaaraatka.
5-tii June 2017-ka ayaa si lama filaan ah waxay dowladaha Aala-Sucuud, Masar, Imaaraatka iyo Baxreyn xiriirka u jareen dowladda Qadar, iyagoona kusoo rogay go’doon dhanka cirka iyo dhulka ah, waxaana ay ku eedayeen iney taageerto dowladan waxay ugu yeereen Argagaxisada.
Balse dowladda Qadar oo adeegsanaysa siyaasad degan ayaa ku guuleystay inaaney wax saameyn muuqata ah ku yeelan go’doonka ay dowladaha deriska ah kusoo rogeen, waxaana warbaahinta Maraykanka ay sheegayaan in dowladda Maraykanka ay dooneyso in dhawaan ay si toos ah u xalliso khilaafka, maadaama madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ahaa ninka huriyay khilaafka.
Isha qoraalka Radio Alfurqaan
Hoos ka Daawo Barnaamijka
Baraarujin Caafimaad: Cun Raashinka Dalka oo ka fogaaw Cuntada Dibadda laga keenay si aad u hesho caafimaad.
Dowladda Maraykanka oo ciidamadeeda kala baxaysa dalka Suuriya.
Mareykanka Oo Kumanaan Askari Udiray Xuduudda uu la Wadaago dalka Mexico.